Amacebo okucoca kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 319
Ngapha koko, phantse ikhulu leepesenti kunokwenzeka ukuba bonke abasebenzisi benethiwekhi yokuncokola i-Instagram okwangoku, sele bezisebenzisile iifilitha ezibonakala njengezinto ezinokukhethwa ngamabali, ubuncinci kube kanye xa befuna ukuthatha umfanekiso bawupose ebalini. Ezi zinto zintsha zitsale umdla omkhulu phakathi kwabasebenzisi, ezigcina i-Instagram yenye yezona nethiwekhi zisetyenziswayo..
Kodwa ke, ngoku awunakusebenzisa kuphela amacebo okucoca ulwelo, kodwa nabani na unokukhetha ukwenza ezakhe izihluzi kwaye abe nethuba lokwenza umkhwa kwimidiya yoluntu. Inkqubo ayinzima kwaphela, Imfuno ekuphela kwayo kukuba nefowuni ehlaziyiweyo kunye nenethiwekhi yoluntu ifakiwe. Ngayiphi na imeko, indlela echanekileyo iya kuchazwa apha ngezantsi.
Iifilitha ze-Instagram zenziwa njani
Ukwenza isihluzi se-instagram, kufuneka kufakwe esinye isicelo esibizwa ngokuba yi-Spark AR Studio. Ingakhutshelwa kwiPC yakho, okanye ukuba ufuna ukwenza icebo lokucoca ulwelo ngokuthe ngqo kwifowuni yakho, Isicelo osisebenzisayo nguMdlali weSpark AR, ekhoyo nge-Android kunye ne-iOS.
Zombini izicelo zokwenza iifilitha zinokuba nzima kakhulu, kodwa nje ukuba uyiqonde imisebenzi kunye nezenzo zabo, ukwenza izinto kule nethiwekhi yoluntu akufuneki kube nzima. Ngale ndlela, kufuneka kugxininiswe ukuba kuphela Imfuneko esisiseko yokusebenzisa ezi zicelo kukuba ube neakhawunti ye-Facebook, apho iziphumo ziya kugcinwa kwixesha elizayo, kwaye zongezwe kwi-Instagram.
Ungazisebenzisa njani ezi zixhobo?
Ngapha koko, ukusebenzisa ezi zixhobo akukho nzima njengoko wonke umntu enokucinga. Emva kokuzifaka kwisixhobo, konke umntu anokukwenza kukungena kunye nokubhalisa iakhawunti. Emva kwexesha, xa usetyenziso luvula, uya kubona iwindow "Ingcebiso" apho ungaqala khona ukwenza amacebo okucoca ulwelo kwiziseko ezizezinye.
Eyona nto isisiseko isenzo esichazwe ngaphambili kukusebenzisa into ebizwa ngokuba yi "augmented reality", esisiseko isebenza ukudibanisa izinto ezithile emfanekisweni, njengakwinyani, oku kunokuba; Iilensi, izinto zokuthambisa, imvelaphi, iimaski, imibala, njl. Ngale ndlela, nabani na oyisebenzisayo unokwenza isitayile sakhe kwaye asidibanise nemvelaphi emiselweyo kwangaphambili.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, amava anokufumana ubuqili, ngombulelo, Isicelo siqulathe ezinye izifundo kunye nezikhokelo. Ukuze wonke umntu afunde ukusebenzisa izinto kunye nemisebenzi enesi sixhobo, ngaphandle kokuntsonkotha kakhulu kwaye ngaphandle kokutyala ixesha elininzi.
Okokugqibela, injongo yokusebenzisa ezi zicelo kukwenza iziphumo kunye neefilitha eziza kusetyenziswa kwinethiwekhi yoluntu i-Instagram. Ukuze zikhutshwe, ukuze nabani na akwazi ukuzisebenzisa. Ke ngoko, Nje ukuba inkqubo yokudala isiphumo igqityiwe, umsebenzisi angayibona ngokuchwetheza ukuze abone iziphumo ezingapheliyo kwi-Instagram.
Okokugqibela, ukuba ufuna ukwandisa ubungakanani besiphumo, kuhlala kunjalo Kuyacetyiswa ukuba uye kwiqhosha "Examine", apho uza kundwendwela ikhathalogu yeziphumo ezenziwe ngabanye abasebenzisi, nabani na angayisebenzisa, kwaye ngamanye amaxesha ungayisebenzisa. kwaye ufumane enye eyenziwe nguwe.
1 Iifilitha ze-Instagram zenziwa njani
1.1 Ungazisebenzisa njani ezi zixhobo?
2 Iziphumo ezintsha
Ungazigcina njani iividiyo kwiTikTok?
Ungamamkela njani nabani na kwiTwitch?